Mesa 20.1.0 iri pano uye inopa kuvandudzwa kweVulkan, optimizations, rutsigiro rukuru uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mesa 20.1.0 iri pano uye inopa kuvandudzwa kweVulkan, optimizations, rutsigiro rukuru uye zvimwe
Iyo itsva vhezheni yeakakurumbira OpenGL uye Vulkan kuitiswa "Tafura 20.1.0" yakatoburitswa kare uye iyi ndiyo yekutanga vhezheni yebazi reMesa 20.1.x iro ine nyika yekuyedza uye kuti mushure mekugadzikana kwekupedzisira kwekodhi, Ichaburitswa senge yakagadzikana vhezheni mushanduro 20.1.1.
Iyi vhezheni itsva yeMesa 20.1.0 inosvika neshanduko dzakasiyana siyana, izvo kumisikidzwa kweiyo yakazara OpenGL 4.6 rutsigiro inosimbiswa yeIntel (i965) uye AMD (radeonsi) GPUs, rutsigiro VhuraGL 4.5 ye AMD r600 uye NVIDIA nvc0 GPU, VhuraGL 4.3 ye virgl, pamwe ne Vulkan 1.2 inotsigira Intel uye AMD makadhi.
Izvo zvakakosha kusimbisa izvoVamwe vatyairi havatsigire maficha ese anodiwa muOpenGL 4.6, seOpenGL 4.6 Solo inowanikwa kana ikakumbirwa mukugadzirwa kwemamiriro. Mamiriro ekuenderana anogona kuzivisa yakaderera vhezheni zvichienderana nedhiraivho yega yega.
Ipo yeiyo Vulkan 1.2 API, yakataurwa neiyo chivakwa apiVersion yechimiro VkPhysicalDeviceProperties zvinoenderana nemutyairi chaiye anoshandiswa.
1 Zvinyorwa zvitsva zveTafura 20.1.0
Zvinyorwa zvitsva zveTafura 20.1.0
Zvekuvandudza kweVulkan izvo zvinoratidzwa mune iyi vhezheni itsva, semuenzaniso, nhete yekusarudza chishandiso chinoshanda cheVulkan API mune masisitimu ane akawanda maGPU ane rutsigiro rweVulkan anomira pamwe nemamiriro ekunze MESA_VK_DEVICE_SELECT, iyo inoshanda yakafanana neDRI_PRIME yeOpenGL.
Ndichiri muIntel Vulkan ANV controller, optimization yeIcelake-based chips (Gen11) yakawedzerwa, iyo inobvumidza kushandiswa kwemavara akachena ekutumira mameseji, kushandiswa kwe cache kwakagadziridzwa pane masisitimu neIntel Ivybridge uye Haswell machipisi.
Imwe shanduko inomira iri mu "ACO" backend iyo yava nerutsigiro rweiyo shaderInt16 mhando yeGFX9 + GPU, iyo inobvumidza kushandiswa kwe16-bit manhamba mune iyo shader kodhi.
YeIntel mifananidzo machipisi, rutsigiro rweNIR vectoring rwakatove rwakawedzerwa rwe AMD machipisi. Padivi rinoshanda, nekuda kwekuvandudza shader optimization, shanduko yakabvumidzwa kuwedzera mashandiro eOpenGL neVulkan mumitambo yakawanda pane masisitimu ane Intel GPUs.
Yeimwe shanduko izvo zvinomira kunze kushambadziro:
Iyo AMD Navi 12 neNavi 14 GPUs inosanganisira rutsigiro rweDCC (Delta Ruvara rwekuomesa) yekuratidzira modhi, iyo inoita kuti iwe ugone kushanda neakadzvanywa dhata dhata nekuronga zvinoburitsa screen
Wakawedzera yekuyedza yeNIR yekutsigira iyo yakasarudzika Gallium3D R600 controller ine rutsigiro rwejometri, shard, vertex, uye tessellation shader.
Chikwata chakawedzerwa kune mutyairi weVulkan RADV nekuda kwekugadziridzwa kwebasa rekurangarira, iro rinowedzera mashandiro eId Tech mitambo pane masisitimu ane AMD APUs.
MuPanfrost, mutyairi akayedza kuyedza kwe OpenGL ES 3.0 kutsigira uye akapa rutsigiro rweBifrost 3D kupa GPU (Mali G31). Iko kwekutanga kuitiswa kwe shader compiler yakagadzirirwa iyo inotsigira iyo yemukati GPU-yakatarwa Bifrost rairo yakatarwa.
Iyo TURNIP Vulkan mutyairi ari kugadzirirwa Qualcomm Adreno GPUs yakawedzera rutsigiro rwejometri shader uye Adreno 650 machipisi.
MuGallium3D-mutyairi LLVMpipe, iyo inopa software kupa, kwaive nerutsigiro rwe tesselyatsionnyh shaders.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa yakakwana changelog Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mesa 20.1.0 iri pano uye inopa kuvandudzwa kweVulkan, optimizations, rutsigiro rukuru uye zvimwe